OGE ewerela Ngwaọrụ iri kacha mma nke 2017 | Akụkọ akụrụngwa
Magazin TIME bụ akara e kwuru n'ọtụtụ ebe, site na teknụzụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndepụta ya ji bụrụ nke nna anyi nke ozi maka njedebe nke afọ. Yesnyaahụ ha kpebiri inye aka na teknụzụ nke ikpeazụ na 2017, na-eche na ha agaghị ewepụta ihe ọhụụ n'ezie na afọ fọdụrụnụ ma anyị nwere ndị mmeri abụọ doro anya, Nintendo Switch na iPhone X.
Onye ọ bụla nọ n'ubi ya ma okpueze dị ka ga hivu nke teknụzụ na afọ a dị obere mgbe ọ bịara n’ihe gbasara Ngwaọrụ. Anyị ga-amatakwu nke ọma ihe kacha mma ngwaọrụ nke 2017 abụwo maka TIME magazin na-enweghị mkparịta ụka.
The iPhone X, ọ bụ ezie na ọ bụ mbubreyo na ụwa nke niile meziri na-achịkwa ruo ugbu a site Samsung na LG, jisiri ike merie ọtụtụ obi na ya peculiar imewe, ya mara mma ihe na n'elu ihe nile na ihe mgbe niile a gburugburu ngosi nke ụlọ ọrụ Cupertino. Ma ọ bụ ma ọ bụ, Apple ekwentị dị taa karịa mgbe ọ bụla, n'ihi ya, ha kpebiri ịmalite ụdị ngwaọrụ dị ọnụ ala karịa na ahịa nke ugbu a. Ma onye mmeri doro anya bụ na Nintendo Gbanye, Nintendo's ngwakọ console jisiri ike weghara anya onye ọ bụla ma merie nnabata ọbụna nke ndị na-azụtaghị ya.
OZI magazine top 10
Super Nintendo Entertainment System (SNES) Omuma
Ihe doro anya bụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ikwenye na ndị ọkachamara na ọha na eze, ọkachasị ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ngwaahịa ndị a amachibidoghị iwu. N'uche gị, gịnị bụ TOP 10?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » OGE ewerela ngwa elekere iri kacha mma nke 2017
Nweta ọnwa atọ nke Spotify naanị euro 0,99